Nagarik News - सुपारी उत्पादनभन्दा निर्यात धेरै!
सुपारी उत्पादनभन्दा निर्यात धेरै!
15 Jan 2016 | 10:07am
काठमाडौं- देशभित्र उत्पादन हुने परिमाणभन्दा धेरै सुपारी निर्यात भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारलाई यसको यथार्थ अध्ययन गर्न र निर्यात तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्। निर्यातको परिमाण धेरै भएको तर स्थानीय उत्पादन भने बिक्री नभएको नमिल्दो अवस्था रहेकाले निर्यातलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेका हुन्।
आयात, निर्यात र स्थानीय उत्पादनको तथ्यांक मिल्दोजुल्दो नभएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले थप अध्ययन गर्न भनेको हो। 'स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन, किसान आन्दोलनमा छन,' समिति अध्यक्ष विश्वराज आङदेम्बेले भने, 'निर्यातको परिमाण भने धेरै देखिएको नमिल्दो तथ्यांक छ।' तथ्यांक हेर्दा अवैध सुपारी निर्यात भएको हुन सक्ने उनले बताए।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को तथ्यांकमा उत्पादनभन्दा निर्यात बढी छ। 'सो आर्थिक वर्षमा १४ हजार २ सय ८५ मेटि्रक टन उत्पादन भएको छ,' समिति सचिव सुदर्शन थापाले भने, 'निर्यात परिमाण भने २३ हजार १ सय ७६ मेटि्रक टन छ।' तेस्रो देशबाट ल्याइएको सुपारी नेपाली भन्दै अवैध रुपमा निर्यात भइरहेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने संसदहरूले बताए।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १ करोड ५१ लाख ६५ हजार ४ सय २३ किलो (१५ हजार १ सय ६५ मेटि्रकटन) सुपारी निकासी भएको तथ्यांक छ। यसको मूल्य २ अर्ब ८३ करोड ७८ लाख ८ हजार छ। सोही अवधिमा देशभित्र झन्डै दोब्बर ४ अर्ब ७२ करोड २८ लाख २० हजारको सुपारी आयात भएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सोही वर्ष नेपालले सुपारी आयात गरेको ८ वटा देशमध्ये सबैभन्दा धेरै इन्डोनेसियाबाट आएको छ। इन्डोनेसियाबाट ३ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख ८३ हजारको सुपारी आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य सामान भारतबाट धेरै आउने भए पनि सुपारी भने त्यहाँबाट धेरै कम आयात भएको छ। यस अवधिमा भारतबाट ६९ करोडको मात्र ल्याइएको तथ्यांक छ। नेपालले सुपारी आयात गर्ने अन्य देशमा चीन, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, भियतनाम र अमेरिका छन्। करोडको परिणाममा सुपारी आयात हुने अन्य देशमा थाइल्यान्ड र मलेसिया छन्, जहाँबाट ८ करोड र ३ करोडको सुपारी भित्रिएको छ।
भन्सारमा निर्यातको तथ्यांक हुने भए पनि उत्पादनको आधारमा किन धेरै निर्यात भइरहेको छ भनेर सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको संसदहरूले बताए। स्थानीय उत्पादकलाई मर्कामा नपार्न सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने र थप अध्ययनको लागि निर्यात रोक्नुपर्ने उनीहरुले बताए। 'तेस्रो देशबाट ल्याएर नेपाली लेबल लगाएर सुपारी निर्यात भइरहेको देखिन्छ,' समितिमा बोल्दै संसदहरूले भने, 'यसले उत्पादक किसानलाई मर्कामा पारेको छ।' उनीहरू उत्पादन अनुसारको निर्यातमात्र हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
निर्यात र उत्पादनको यथार्थ जानकारी संकलनको लागि स्थलगत अध्ययनसमेत गर्ने समितिमा जानकारी गराइयो। 'थप अध्ययन र यथार्थ तथ्यांक संकलनको लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं,' थापाले भने।
सरकारले दिने 'उत्पत्तिको प्रमाणपत्र' एकाधिकार ढंगले दिएको भन्दै सुपारी उत्पादन गर्ने केही किसानले आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। सरकारले सुपारी निर्यात गर्न दिने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बाँड्ने अधिकार नेपाल उद्योगि वाणिज्य महासंघलाई दिएको छ। महासंघले 'उत्पत्तिको प्रमाणपत्र' नेपाल सुपारी खेती संस्थालाई दिएको थियो। महासंघले उचित ढंगबाट 'उत्पत्तिको प्रमाणपत्र' नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सुपारी खेती प्रवर्द्धक एवं कृषि विकास संघ, मेची सुपारी तथा फलफूल विकास संस्था लगायत संस्थाले केही समयदेखि महासंघको कार्यालयमै धर्ना दिइरहेका छन्। समितिमा बोल्दै सांसदहरूले 'उत्पत्तिको प्रमाणपत्र' जारी गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिनुको कारण सोधेका थिए।